နေပူပူမှာ ရေငတ်လွန်းလို့ ဓာတ်ဆားရည် သောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါတွေကို သတိထားပါ - Real Gaming Myanmar
နေပူပူမှာ ရေငတ်လွန်းလို့ ဓာတ်ဆားရည် သောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါတွေကို သတိထားပါ
By thant naing /2months ago / Health / No Comments
ဓာတ်ဆားမှုန့် ရေဖျော်သောက်တော့မယ်ဆိုရင် သတိထားပါ။ ဓာတ်ဆားဆိုတာဘာလဲ ဘာအတွက်သုံးတာလဲ။ ဓာတ်ဆားမှုန့်(Oral Rehydration Salts)ဆိုတာ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းနဲ့အကြောင်းအမျိူးမျိူးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ရေဓာတ်နဲ့ဓာတ်ဆားများ လျော့နည်းခြင်းအတွက်ရေနဲ့ဖျော်သောက်တာပါ။ယခုလို အလွန်ပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာ ချွေးထွက်လို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ရေနဲ့ဆားဓာတ်တွေ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အကောင်းဆုံးဆေးမှုန့် ဖြစ်ပါတယ် …. ။
ဘယ်လိုဓာတ်ဆားသောက်ရင် အကောင်းဆုံးလဲ …..
မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးလုပ်ငန်းစက်ရုံက ထုတ်လုပ်တဲ့ဓာတ်ဆား၊ နိုင်ငံတကာမှတင်သွင်းရောင်းချတဲ့ဓာတ်ဆားမျိူးစုံ၊ အပြင်ဈေးကွက်ထဲမှာ ရိုးရိုးဓာတ်ဆားများ/သစ်သီးစုံဓာတ်ဆားများ အများအပြားရောင်းချနေပြီး တမျိူးနဲ့တမျိူးအာနိသင်သိသာစွာကွာခြားခြင်းမရှိပဲ အားလုံးကောင်းကြပါတယ် …… ။အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ကြာရှည်အထားခံတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးစက်ရုံ(MPF)က ထုတ်တဲ့ ဓာတ်ဆားပါ ….. ။
ဓာတ်တားထုတ်ဝယ်တဲ့အခါ ပထမဆုံးကြည့်သင့်တာက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်(Expiry date) ပါ။ Date ကောင်းတာနဲ့တင်မပြီးပါဘူး လတ်ဆပ်မှု့ရှိ/မရှိ လှုပ်ကြည့်ရပါမယ် ကပ်နေရင်(သို့)အထဲကအမှုံ့အရောင်ပြောင်းနေရင် လုံးဝမသောက်သင့်ပါဘူး။ ဓာတ်ဆားထုတ်ကိုဘယ်လိုထားသိုရမလဲ …… ။
ဓာတ်ဆားတထုတ်ကို ရေကျက်အေး(သို့)ရေတစ်လီတာ/ရေသန့်တဗူးနဲ့ဖျော်ရမှာပါ သတိထားရမှာက ရေနွေးနဲ့မဖျော်ရသလို ရေခဲသေတ္တာထဲကရေအေးနဲ့လဲမဖျော်သင့်ပါဘူး ဓာတ်ပျယ်သွားတတ်လို့ပါ ….. ။ဓာတ်ဆားထုတ်ကို အေးပြီးခြောက်သွေ့တဲ့နေရာမှာ ထားသိုရမှာဖြစ်ပြီး နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့နေရာတွေမှာမထားသင့်ပါဘူး။ ဓာတ်ဆားရည်ကို ဖျော်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ကုန်အောင်သောက်ရမှာဖြစ်ပြီး ၂၄ နာရီ ထက်ကျော်သွားတဲ့ ဓာတ်ဆားရည်ကို သွန်ပစ်ရမှာပါ ….. ။
တစ်နေ့ဘယ်နှစ်ထုတ်သောက်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုလူတွေမသောက်ရဘူးလဲ ……
ပုံမှန်အားဖြင့်ဓာတ်ဆားကို တစ်ရက်အများဆုံး ၂ ထုတ်သာသုံးသင့်ပါတယ် ၂ ထုတ်ထက် ပိုသောက်မိရင် ခန္ဓာကိုယ်ကပိုနေမဲ့ ဆားဓာတ်ကိုမစွန့်ထုတ်နိုင်ပဲ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်တတ်လို့ပါ။ ဓာတ်ဆားထုတ်ကို ဆီးချိူ /သွေးတိုးရှိသူတွေ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့မှသောက်သင့်ပါတယ် ….. ။ဒါကြောင့်တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုသလို ချွေးထွက်အလွန်များတဲ့ ယခုလိုနွေရာသီမှာ ဓာတ်ဆားထုတ်သောက်တဲ့အခါ ဆင်ခြင်စရာလေးတွေကို ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်​ …. ။တခုခု ရရင်​​ကျေနပ်ပါ​တယ် ….. ။
Credit: ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးတစ်ခွက်
ဓာတျဆားမှုနျ့ ရဖြေျောသောကျတော့မယျဆိုရငျ သတိထားပါ။ ဓာတျဆားဆိုတာဘာလဲ ဘာအတှကျသုံးတာလဲ။ ဓာတျဆားမှုနျ့(Oral Rehydration Salts)ဆိုတာ ဝမျးပကျြဝမျးလြှောခွငျးနဲ့အကွောငျးအမြိူးမြိူးကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ ရဓောတျနဲ့ဓာတျဆားမြား လြော့နညျးခွငျးအတှကျရနေဲ့ဖြျောသောကျတာပါ။ယခုလို အလှနျပူပွငျးတဲ့အခြိနျမှာ ခြှေးထှကျလို့ဆုံးရှုံးသှားတဲ့ ရနေဲ့ဆားဓာတျတှေ ပွနျလညျဖွညျ့တငျးဖို့အကောငျးဆုံးဆေးမှုနျ့ ဖွဈပါတယျ …. ။
ဘယျလိုဓာတျဆားသောကျရငျ အကောငျးဆုံးလဲ …..
မွနျမာနိုငျငံဆေးဝါးလုပျငနျးစကျရုံက ထုတျလုပျတဲ့ဓာတျဆား၊ နိုငျငံတကာမှတငျသှငျးရောငျးခတြဲ့ဓာတျဆားမြိူးစုံ၊ အပွငျစြေးကှကျထဲမှာ ရိုးရိုးဓာတျဆားမြား/သဈသီးစုံဓာတျဆားမြား အမြားအပွားရောငျးခနြပွေီး တမြိူးနဲ့တမြိူးအာနိသငျသိသာစှာကှာခွားခွငျးမရှိပဲ အားလုံးကောငျးကွပါတယျ …… ။အရညျအသှေးပွညျ့ဝပွီး ကွာရှညျအထားခံတာကတော့ မွနျမာနိုငျငံဆေးဝါးစကျရုံ(MPF)က ထုတျတဲ့ ဓာတျဆားပါ ….. ။
ဓာတျတားထုတျဝယျတဲ့အခါ ပထမဆုံးကွညျ့သငျ့တာက သကျတမျးကုနျဆုံးရကျ(Expiry date) ပါ။ Date ကောငျးတာနဲ့တငျမပွီးပါဘူး လတျဆပျမှု့ရှိ/မရှိ လှုပျကွညျ့ရပါမယျ ကပျနရေငျ(သို့)အထဲကအမှုံ့အရောငျပွောငျးနရေငျ လုံးဝမသောကျသငျ့ပါဘူး။ ဓာတျဆားထုတျကိုဘယျလိုထားသိုရမလဲ …… ။
ဓာတျဆားတထုတျကို ရကေကျြအေး(သို့)ရတေဈလီတာ/ရသေနျ့တဗူးနဲ့ဖြျောရမှာပါ သတိထားရမှာက ရနှေေးနဲ့မဖြျောရသလို ရခေဲသတ်ေတာထဲကရအေေးနဲ့လဲမဖြျောသငျ့ပါဘူး ဓာတျပယျြသှားတတျလို့ပါ ….. ။ဓာတျဆားထုတျကို အေးပွီးခွောကျသှတေဲ့နရောမှာ ထားသိုရမှာဖွဈပွီး နရေောငျခွညျတိုကျရိုကျထိတှတေဲ့နရောတှမှောမထားသငျ့ပါဘူး။ ဓာတျဆားရညျကို ဖြျောပွီး ၂၄ နာရီအတှငျး ကုနျအောငျသောကျရမှာဖွဈပွီး ၂၄ နာရီ ထကျကြျောသှားတဲ့ ဓာတျဆားရညျကို သှနျပဈရမှာပါ ….. ။
တဈနဘေ့ယျနှဈထုတျသောကျရမလဲ၊ ဘယျလိုလူတှမေသောကျရဘူးလဲ ……
ပုံမှနျအားဖွင့ျဓာတျဆားကို တဈရကျအမြားဆုံး ၂ ထုတျသာသုံးသငျ့ပါတယျ ၂ ထုတျထကျ ပိုသောကျမိရငျ ခန်ဓာကိုယျကပိုနမေဲ့ ဆားဓာတျကိုမစှနျ့ထုတျနိုငျပဲ သှေးတိုးရောဂါဖွဈတတျလို့ပါ။ ဓာတျဆားထုတျကို ဆီးခြိူ /သှေးတိုးရှိသူတှေ ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြနဲ့မှသောကျသငျ့ပါတယျ ….. ။ဒါကွောငျ့တနျဆေး လှနျဘေးဆိုသလို ခြှေးထှကျအလှနျမြားတဲ့ ယခုလိုနှရောသီမှာ ဓာတျဆားထုတျသောကျတဲ့အခါ ဆငျခွငျစရာလေးတှကေို ကနျြးမာရေးဗဟုသုတအနနေဲ့ တငျပွလိုကျရပါတယျ​ …. ။တခုခု ရရငျ​​ကနြေပျပါ​တယျ ….. ။
Credit: ကနျြးမာရေးအတှကျ ဆေးတဈခှကျ
Previous: သင့်ကို လုံးဝ အံ့အားသင့် သွားစေမယ့် ဒူဘိုင်း က သူတောင်းစားတွေရဲ့ တစ်လ ၀င်​ငွေ
Next: နာမည် ကြီးနေတဲ့ တောင်ငူနယ် ရွာလေးတစ်ရွာ၏ ဒုလ္လဘကိုရင်ကြီးများ ဆွမ်းစားပင့်ခြင်း ဓလေ့ (ရုပ်သံ)